कोभिडका संयन्त्र सक्रिय - Khabar Break
कोभिडका संयन्त्र सक्रिय
काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथामका लागि यसअघि गठित सरकारी संयन्त्र पुनः सक्रिय हुन थालेका छन्। कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)को शनिबार बसेको बैठकले आफ्ना जिल्ला संयन्त्रलाई अझ बढी क्रियाशील बनाउने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव खगराज बरालले कोरोना संक्रमण बढिरहेकाले यसको नियन्त्रणका लागि सतर्कता अपनाउने र निगरानी राख्नुपर्ने विषयमा बैठकमा छलफल भएको बताए। ‘विगतमा कोरोना संक्रमण अलि कम भएका बेला जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी) निस्क्रिय भएका थिए। अब सावधानी अपनाउन सक्रिय बनाउने निर्णय भएको छ’, सचिव बरालले भने, ‘विगतका निर्णयलाई एक्टिभेट बनाउने विषयमै छलफल भयो। सीमा नाकामा हेल्थ डेस्कलाई सक्रिय बनाउने निर्णय भएको छ। अहिले नै कडा कदम चाल्नु नपरोस भन्ने हो। कडा कदम चाल्नुअघिको सतर्कता र सावधानीका विषयमा छलफल भएको छ।’
भारतबाट फर्किनेको एन्टिजेन एवं पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको सचिव बरामलले बताए। क्वारेन्टाइन व्यवस्थित गरी लक्षणविहीनलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको जनाइएको छ।
बैठकमा विद्यार्थीमा नयाँ कोरोना संक्रमण तीव्र ढंगले बढेपछि तीन साता शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। दुई सातायता विद्यालय जाने उमेर समूहमा संक्रमण पुष्टि हुने क्रमसँगै विकल्पका रूपमा अनलाइन माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भएको हो। यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने कि नलैजाने विषयमा निर्णय भइनसकेको जनाइएको छ। काठमाडौं, पोखरालगायत क्षेत्रमा १२ वर्षमाथिका विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य विभागअन्तर्गत इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। एसजिन नेगेटिभ (यूके भेरिएन्ट)को मात्रा बढ्दो क्रममा देखिएपछि विद्यालय बन्दको तयारी गरिएको हो।
महाशाखाका निर्देशक डा. कृष्ण पौडेलका अनुसार भारतीय सीमावर्ती नाकाबाट स्वदेश फर्किएका नेपालीमा नयाँ कोरोना संक्रमण देखिएको छ। डा. पौडेलले भने, ‘कोरोना भाइरस पोजिटिभ पुष्टि भएका व्यक्तिमा यूके भेरियन्टसँग मिल्दोजुल्दो (बी.१.७ भेरियन्ट) देखिएको छ। यो छिटो सर्ने र फैलने भाइरस हो। कम उमेरका व्यक्तिमा पनि बढी जटिलता देखापर्छ।’ अहिले संक्रमण दिनानुदिन वृद्धि भइरहेकाले अस्पताल भर्ना हुने दर बढी हुन सक्ने उनले बताए।
अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा भर्नादर बढी हुने आकलन स्वास्थ्य अधिकारीहरूले गरेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २५ जनाभन्दा बढी भेला हुने खालका सभा÷सम्मेलन तथा कार्यक्रम रोक्न सिफारिस गरेको छ।
३ सय ३७ संक्रमित थपिए
पछिल्लो चौबीस घण्टा थप ३ सय ३७ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। तीमध्ये काठमाडौंमा सबैभन्दा धेरै १ सय १६ जना नयाँ संक्रमितको कोरोना भाइरस पोजिटिभ पुष्टि भएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या २ लाख ७९ हजार ७ सय २५ पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हाल मुलुकभर २ हजार ८ सय जना सक्रिय संक्रमित छन्। पछिल्लो चौबीस घण्टामा संक्रमणबाट एक जनाको ज्यान गएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
भारतमा कोरोना संक्रमणले दैनिक रेकर्ड कायम गर्न थालेपछि नेपालमा जोखिम बढेको छ। भारतमा शनिबार १ लाख ४५ हजार ३ सय ८४ संक्रमित थपिएका त्यहाँको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ।